U -eryada eeyaha: dabiici iyo macmal | Eeyaha Adduunka
Eey -eryaha: dabiici ah oo macmal ah
Nat Cerezo | 28/09/2021 12:24 | Tababar
Ka -eryaha eeyaha ayaa aad waxtar u leh haddii aan rabno inaan eeyaha ka fogeyn dayrka ama beertayada. Waxaa jira noocyo badan, ha ahaadaan kuwo dabiici ah, buufin ama xitaa qaab qalab oo soo saara ultrasound, inkasta oo aysan had iyo jeer waxtar u lahayn ama ammaan u ahayn xayawaanka.
Qodobkaan waxaan arki doonnaa dhowr eryo eeyaha iyo, marka lagu daro, waxaan ka hadli doonnaa mowduucyo kale oo ka sii adag, sida sababta aysan u fiicnayn in loo isticmaalo ultrasound -ka wax celiya, waxaanan ku siin doonaa xoogaa cunto -karin iyo talooyin Iska celiyaha guryaha lagu sameeyo eeyaha.
MENFORSAN Antiorines ...
Eeg bixinta Eeg astaamaha
Ka -saaraha Xalka fudud ...
Buufiyo Shixnad Buufinta ...
MENFORSAN Anti-qaniinyada ...
Faallooyin ma lahan
PETSLY Buufin Antiorines ...
PetSafe Spray Repelente...
1 Cayaaraha ugu fiican eeyaha
1.1 Antipi eeyaha iyo bisadaha
1.2 Kareemka udgoon
1.3 Apple dhadhan anti-qaniinyada
1.4 Alaabta Guryaha iyo Kaarbiyaha Buufiye
1.5 Ka -hortag dabiici ah oo ku salaysan basbaas
1.6 Mesh silig
2 Noocyada wax iibiya eeyaha
3 Isticmaalka ultrasound -ka eeyaha
4 Ka -hortagayaasha dabiiciga ah
4.1 Oo khal
4.4 HA isticmaalin ammonia
5 Meesha laga iibsado ka -eryaha eeyga
Cayaaraha ugu fiican eeyaha
Antipi eeyaha iyo bisadaha
Alaabtan Menforsan waa oo si gaar ah loogu talagalay in looga hortago in bisadaha iyo eydu ay ka fiiriyaan wajiyada, sabuurada dhinaceeda ama xitaa giraangiraha gaarigaaga. Soo -celiyaha wuxuu leeyahay udug aad u fiican waxaana loogu talagalay labada eeyo iyo bisadaha, waxaa dheer, waxaa loo isticmaali karaa gudaha iyo dibaddaba. Isticmaalkiisu waa mid aad u fudud, maadaama ay tahay inaad si fiican u nadiifiso aagga laga hadlayo oo aad ku buufiso alaabta. Waa in la isticmaalaa dhowr maalmood si ay u dhaqan gasho.
By habka, soo -saaraha wuxuu kugula talinayaa inaadan nadiifin aagga lagu daaweeyo bleach ama ammonia maxaa yeelay urta ayaa soo jiidan karta xayawaanka si ay halkaas uga soo fiiriyaan maxaa yeelay kaadidu waxay leedahay ur isku mid ah. Ugu dambayn, ha u isticmaalin alaabta dhirta.
Ubaxa 40559 ...
La mid ah badeecadii hore, tan buufiyo si looga hortago in bisadaha iyo eydu ay ka dillaacaan meelaha aanan doonayn. Waa mid aan sun ahayn waxayna u shaqaysaa qaab aad u fudud, taasoo u keenta urka diidmada xooggan eeyaha iyo bisadaha. Qaabka loo adeegsado waa mid sahlan, maadaama ay tahay inaad si fiican u nadiifiso aagga oo aad u adeegsato alaabta, taas oo ay tahay inaad mar walba cusbooneysiiso si aysan lumin saameynteeda oo aad xoojiso farriinta. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale u shaqaysaa aagagga marinnada ee aadan doonaynin inay xoolahani maraan. Si kastaba ha ahaatee, marka aad codsaneyso, iska ilaali inaad ku dul korto dhirta.
Apple dhadhan anti-qaniinyada
Eeyga Caafimaadka leh ee Buufiya ...
Haddii eygaaga wuxuu jecel yahay inuu calaliyo kabahaaga sida xanjo, buufinkan ka hortagga qaniinyada ayaa ku caawin kara. Waxaa loo adeegsadaa eeyaha iyo bisadahaba waxaana lagu tababaraa inaysan qaniinin meelaha lagu buufiyo. Waxay ka kooban tahay walxo dabiici ah oo gebi ahaanba ah, sidaa darteed ma aha sun, waxayna u shaqaysaa qaab aad u fudud: dhadhankeeda tufaaxa ee qadhaadhaa wuxuu ka qaadaa rabitaanka sii waditaanka qaniinyada.
Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa, ku salaysan faallooyinka, kuma shaqayso eeyaha oo dhan ... qaar baa u muuqda inay jecel yihiin!
Alaabta Guryaha iyo Kaarbiyaha Buufiye
CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA Knabber X ...
Mid ka mid ah alaabooyinka ugu xiisaha badan ee eeygaaga ka fogee alaabta guriga, fadhiga fadhiga, ama roogagga iyo roogagga miyuu yahay mid wax celisa oo ah qaab buufin ah oo si gaar ah loogu talagalay meelahan. Buufinani waxay ku timaadaa dhalo 100 ml ah, gebi ahaanba waa dabiici waxaana loo isticmaali karaa gudaha iyo dibaddaba, sidoo kale waxaa loogu talagalay eeyaha iyo bisadaha. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay dhibic taban, mar haddii ay xoogaa ka qaalisan tahay buufinnada kale ee isku nooc ah.
Ka -hortag dabiici ah oo ku salaysan basbaas
Ka bixitaanka kulul ee BSI - wax laga xumaado ...
Ku habboon isticmaalka dibadda, gaar ahaan meelaha cawska leh, dib -u -celiyaha eeyaha (wuxuu kaloo la shaqeeyaa bisadaha) oo ku salaysan maaddooyinka dabiiciga ah sida basbaaska waxay u reebi doontaa ur aad u xun iyaga. Waxaa jira laba litir oo badeecad ah oo ay tahay inaad dalbato si ay u dhaqan gasho, haddii kale ma shaqeyn doonto.
Sida alaabooyinka kale ee qaabkan, dhibic taban ayaa ah, iyada oo aan la ogayn dookhyada eeyaha, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto qof jecel urta oo aan xallin doonin dhibaatada.
Guriga Beerta Amagabeli 1M ...
Dhibaatooyin waaweyn, daawooyin waaweyn: Kuwa raadinaya hab ay ku ilaaliyaan bisadaha iyo eeyaha meel ka baxsan beertooda, mid ka mid ah xalka ugu waxtarka badan ayaa ah in la sameeyo xayndaab. ee ku xeeran meesha aad rabto inaad ilaaliso. In kasta oo kuwa ugu yar ama kuwa la isku qurxiyo aysan yeelan doonin wax badan oo ay qabtaan marka ay timaado ka fogaanshaha marinka xayawaanka, mesh silig waa shay kale. Qaabkan wuxuu ka samaysan yahay silig ku daboolan caag cagaaran wuxuuna ka kooban yahay 20 mitir oo hal mitir oo dherer ah oo aad dhigi karto sidaad jeceshahay agagaarka barxaddaada ama beertaada. Intaa waxaa dheer, godadka ku jira mesh -ku waa yar yihiin oo aan waxba soo geli karin ama ka soo bixi karin.
Noocyada wax iibiya eeyaha
Kalsoonida iyo inta jeer ee Dib -u -iibiyayaal kala duwan oo jira eeyaha kaliya kuma xirna sheyga laftiisa, laakiin sidoo kale eyga aan dooneyno inaan kaxeyno, sida da 'ama xitaa taran, sidaa darteed guushiisu mararka qaar waxay ku xiran tahay tijaabo iyo qalad. Sidaa darteed, noocyada kala -soocidda ee kala duwan waxaan ka helnaa:
Waxay yihiin kuwa ugu badan ee laga helo dukaamada, ama qaab buufin, kubbado ama xitaa jel. Waxay caadaysteen inay dhigaan aagga aan rabno inaan ka cabsiino eyga. Waxaa laga samayn karaa maaddooyinka dabiiciga ah ama kiimikooyinka u keena urka ur xun. Waxay u adeegaan inay ka fogaadaan qaniinyada guriga dhexdiisa, oo haddii dibedda la dhigo, waa in si joogto ah loo cusbooneysiiyaa si aysan u lumin saamaynta.
Dhawaqyo Waxay ka kooban yihiin qalab dibedda la saaray oo loo malaynayo inuu soo daayo soo noqnoqda oo eeyaha kaxaysa. Si kastaba ha ahaatee, laguma talinayo haddii aad guriga ku haysato eeyo, maadaama ay iyaduna dhibsato.
Xumaanta weyn daawooyin waaweyn: mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu caansan ee caadiga ah waa dayrarka ama dayrarka, kuwaas oo ku xeeran aagga la ilaalinayo (sida barxadda). Waxa ugu fiican ayaa ah inay si fiican u ilaaliyaan eeyaha, inkasta oo aysan waxtar u lahayn bisadaha ama qoolleyda, oo kori kara ama duuli kara.
Ugu dambeyntii, hal dariiq oo lagu cabsi geliyo eeyaha waa in la abuuro walax leh waxyaabo dabiici ah lafteena si looga fogeeyo beerteenna. Caadiyan waxay ka bilaabantaa walxo aan raali ka ahayn eeyaha. Maaddaama urkooda uu aad uga horumarsan yahay kuweenna, waa hab wanaagsan oo laga fogeeyo, in kasta oo ay nooga baahan tahay inaan cusboonaysiinno maadaama urtii ay baaba'ayso.
Isticmaalka ultrasound -ka eeyaha
Mid ka mid ah siyaabaha ugu badan ee eeyaha looga fogeeyo waa adigoo isticmaalaya aaladaha soo saara ultrasound. Qalabkani xitaa wuxuu ku yimaadaa qaab jeebka ah (si loogu tababaro eeyaha) ama hab la dhigi karo beerta, waxayna soo saaraan soo noqnoqoshada ay eeyaha oo kaliya maqli karaan, taas oo aan u wanaagsanayn iyaga oo, mabda 'ahaan, cabsi gelisa .
Si kastaba ha ahaatee, isticmaalkiisa laguma talinayo si aad ah ama aad loogu kalsoon yahay. Dhinac, waxaa jira badeecooyin si toos ah u shaqeynin, ama kaliya la shaqeeya eeyaha qaarkood (dareenkooda acoustic wuxuu ku xiran yahay arrimo ay ka mid yihiin da'da, taranka ...). Dhinaca kale, waa arxan daran yihiin waxayna dhaawici karaan dhegahooda, marka ma aha ikhtiyaar aad loogu taliyo, gaar ahaan haddii aad leedahay eeyo.
Ka -hortagayaasha dabiiciga ah
Haddii aadan ku faraxsanayn xalalka ganacsi ahaan la heli karo, waxaan abuuri karnaa kuwa naga celiya eeyaha si dabiici ah iyo hab aad iyo aad u jaban oo sahlan.
Khamrigu waa cunsur aan si fiican u adeegsan karno si aan eeyaha uga fogeeyo, maadaama urkooda uu u muuqdo midka aan loo dulqaadan karin. Diyaarinta xalka waa mid aad u fududMaadaama aad u baahan tahay dhalo buufin oo madhan oo kaliya ku qas 50% biyo 50% khal (isticmaal khal si aad u nadiifiso si ka fiican labiska). Ku isticmaal meesha aagga aad rabto inaad ka cabsiiso eeyaha. Iska ilaali inaad isku dartid dhirta ama cawska dushiisa haddii aadan rabin inaad disho.
Midhaha liin dhanaanta waa urka kale eeydu neceb yihiin, waana sababta ay u yihiin ikhtiyaar wanaagsan oo loo adeegsado ka -celiyayaal. Sida ugu badan ee loo sameeyo waa iyadoo diirka liin ama liin daadsan aagga. taas oo aad rabto inaad ka ilaaliso booqashooyinka canine, in kasta oo ay tahay seef laba af leh: in kasta oo urta liinta ay iska celiso eyda, waxay soo jiidan kartaa jiirka iyo jiirka.
Dib -u -celin kale oo dabiici ah oo wanaagsan ayaa ah in la isticmaalo basbaas, urta oo aysan jeclayn gabi ahaanba. Waxaad isku qasan kartaa cayriin iyo budada basbaaska madow oo ku walaaq isku darka aagga aad rabto inaad ilaaliso eeyaha. Sida kiisaska kale, waa inaad cusboonaysiisaa waqti ka dib, maadaama roobku uu lumin doono waxtarkiisa.
HA isticmaalin ammonia
Si la mid ah khal, ammonia waxay iska celisaa eeyaha, hase yeeshee waxay u badan tahay inay keento cuncun cuncun iyo dhaawac, markaa laguma talinayo in la isticmaalo. Sidii aan nidhi, khalku waa xal isku mid ah oo waxtar leh.
Meesha laga iibsado ka -eryaha eeyga
Waxaa jira a meelo badan oo aan ka iibsan karno eryada eeyaha taas oo aan u adeegsan karno si aan uga ilaalino barxaddayada ama teeradeena inay ka nabad galaan kuwa ku soo duulay eeyaha. Tusaale ahaan:
En Amazon Waxaad ka heli doontaa noocyo badan oo ka -eryayaal nooc kasta leh (buufin, kubbado, dabiici, macmal ...) oo caawin kara. Intaa waxaa dheer, shaqadeeda koowaad waxaad ku haysataa guriga daqiiqad gudaheed, iyada oo ay ugu wacan tahay boqolaal faallooyinkeeda, waxaad dooran kartaa midka ku habboon baahiyahaaga.
En Dukaamada khaaska ah sida Kiwoko ama TiendaAnimal sidoo kale waxay leeyihiin noocyo kala celiya, dhammaantoodna waa tayo. Sida dhibic lagu daray, xaqiiqda ah in bakhaarradani ay leeyihiin suurtogalnimada iibsashada onlaynka ama jirka ayaa aad waxtar u yeelan karta haddii aad raadinayso badeeco gaar ah ama talo.
Ugu dambeyntii, in qaybta beer -beerista ee silsiladda weyn Sida xarumaha Carrefour ama DIY sida Leroy Merlin waxaad sidoo kale heli doontaa xoogaa iska celiyayaal ah, in kasta oo kuwani ay u muuqdaan kuwo xoogaa sabool ah oo kala duwan, sidaa darteed waxay si fudud u yihiin ikhtiyaar in la tixgeliyo oo kaa saari kara meel cidhiidhi ah.
Ka -eryaha eeyaha ayaa waxtar u leh in eyda laga fogeeyo dayrka ama beerta. Noo sheeg, ma isticmaashay mid ka mid ah kuwa wax celiya? Ma kuu shaqeysay? Miyaad taqaanaa cunto karis badan oo dabiici ah oo aynaan ku darin?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Tababar » Eey -eryaha: dabiici ah oo macmal ah
Wax walba eeygaaga
Daryeel eeygaaga sida ugu badan ee uu kuugu daryeelo adiga talooyinkaan aan bixinno:
4ta tallaabo ee lama huraanka ah marka la korsanayo eyga
Ilaaliyaha kursiga gaariga eey
Soo qaado qoraaladii ugu dambeeyay eeyaha.